Arsenal oo Man Utd kula dagaalameysa Max Clayton, xilli ay dooneyso Podolski-ga cusub. - Caasimada Online
Home Warar Arsenal oo Man Utd kula dagaalameysa Max Clayton, xilli ay dooneyso Podolski-ga...
Arsenal oo Man Utd kula dagaalameysa Max Clayton, xilli ay dooneyso Podolski-ga cusub.
Arsenal ayaa Manchester United kula biirtay xiisaha loo qabo 18 jirka weerarka uga ciyaara Crewe Alexandra Max Clayton, sida uu qoraayo wargeyska Metro. Xigaan ayaa 50 kulan u saftay ka dib markii uu bishii April 2010kii kasoo mid noqday kooxda koowaad.
Manchester United, Liverpool iyo Newcastle ayaa hubinaayey xaaldiisa bilihii lasoo dhaafay laakiin hada waxay u muuqataa inuu ka faa’iideysanaayo tababaraha inta badan dhalin yarta raadsada ee Arsene Wenger.
Si kastaba, Arsenal waxay diyaar u tahay inay Janaayo gacanta kusoo dhigto xidigaan tababare Arsene Wenger ayaana wakiilkiisii hore ee Pat Rice u diray si uu usoo daawado Clayton.
Dhanka kale Arsenal ayaa dooneysa inay soo xareysato xidiga reer Jarmal ee lagu sheego inuu yahay Lukas Podolski-ga cusub Serge Gnabry oo 17 jir ah.